Naya Bikalpa | हात बारम्बार धोऔँ, भीडभाडबाट बचौँ र सकेसम्म एकान्त बासलाई प्राथमिकता दिऔँ - Naya Bikalpa हात बारम्बार धोऔँ, भीडभाडबाट बचौँ र सकेसम्म एकान्त बासलाई प्राथमिकता दिऔँ - Naya Bikalpa
हात बारम्बार धोऔँ, भीडभाडबाट बचौँ र सकेसम्म एकान्त बासलाई प्राथमिकता दिऔँ
प्रकाशित मिती: २०७६ चैत्र १०, ०८: ०१: २७
१. कोरोनाको कहर नेपालमा अझै प्रवेश नगरे पनि नेपाल सरकारले जुन तत्परता देखाएको छ, त्यसकालागि सबैको सहयोग आवश्यक छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई उच्च जोखिममा यसकारणले राखेको होला कि विश्वको महामारीले नेपालमा पक्कै प्रवेश गर्नेछ ।
अहिलेसम्म कुनै संक्रमित फेला नपरे पनि –अपवादमा एक जना पहिले नै बिसेक भइसकेको अवस्था)डर त मान्नैपर्छ । बाघले मलाई अहिलेसम्म भेटेको छैन भनेजस्तै हो । भेटेपछि त मार्छ नै ।
२. संसारमा स्वास्थ्यको वारेमा अत्यन्त संवेदनशील युरोप र उत्तर अमेरिका यो कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त छ । अर्थात् युरोप खासगरी कोभिड—१९को यस्तो मारमा फसेको छ कि इटली र स्पेनको अवस्था नाजुक छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको यो समीक्षा लेख्दासम्मको सूचनाअनुसार विश्वमा १६५ देशमा कोभिड—१९को संक्रमण फैलिएको छ ।
मानिसहरुको मृत्युको संख्या पनि १० हजार कटेको छ । २ लाखभन्दा बढीमा संक्रमण फैलिएको देखिएको छ । यो संख्या बढ्दो छ एकातिर भने संक्रमितहरु प्नि बिसेक भएर घर फर्कने क्रमपनि बढेकै छ । यो पनि अर्को सकारात्मक पक्ष हो । सबै संक्रमित मरेका छैनन् । तर त्रास भयानक देखिन्छ विश्वभर । अणुवमभन्दा पनि डरलाग्दो मानिएको छ । कतै देखिँदैन, भेटिँदैन तर मानिसहरुलाई ग्रसित छन् ।
३. नेपालमा हाम्रो अवस्था जे छ, त्यसबाट नै हामीले आफ्नो बचाउ गर्ने हो । बाहिरबाट आउन सक्ने संक्रमणलाई रोक्ने र आफ्नामा पनि संक्रमणलाई फैलिन नदिनकालागि सतर्कता अपनाउने हो ।
४. जनस्वास्थ्य भन्दा ठूलो सेवा अर्को हुँदैन । जनता भएमात्र देश हुन्छ, देश भएमात्र शासन चलाउन पाइन्छ । राजनीतिक दलहरुको कर्तव्य हो जनताको सेवामा अनवरत लागिरहने र सरकारलाई यसबेलामा सहयोग गर्दै जनसेवालाई उच्चस्तरको कामको रुपमा विकसित गर्ने ।
५. यो बेलामा शङ्का उपशङ्का भन्दा विशेषज्ञहरुको सल्लाहअनुसार स्वास्थ्य सल्लाहमान्नु आवश्यक देखिन्छ ।
भोलि महामारी हुनभन्दा अहिले नै सजगता अपनाउनु पर्छ र दुर्गम तर जाडो क्षेत्रहरुमा बेलैमा आवश्यक सजगता अनि ओखतीको प्रवन्ध आवश्यक छ । सहरी क्षेत्रमा त झन घना आवादी भएकाले यदि कोरोना भाइरस प्रवेश ग¥यो र अनियन्त्रित अवस्थामा पुग्यो भने यसले गर्ने क्षति अचिन्त्य हुनेछ । यसवारेमा स्वास्थ्य क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र तथा सबै नेपाली जनताआफैँ सजग र सतर्क हुनु आवश्यक देखिएको छ ।
६.चीन जस्तो सुविधा सम्पन्न देशमा र प्राविधिक रुपमा दक्ष जनशक्ति भएको देशमात यसले महामारीको रुप लियो भने हामीलाई त यसले राष्ट्रिय सङ्कट नै उत्पन्न गर्नेछ । हुन त हामीले वुहानबाट आफ्ना नेपाली नागरिकहरुलाई उद्धार गरेका छौँ र ती आएका १७५जनामा कुनै पनि प्रकारको संक्रमण नरहेको प्रमाणित भएर सबै नै घरघरमा पुगेका छन् । अरु पनि स्वैच्छिक रुपमा जँचाउन गएका छन् र कुनै पनि प्रकारको लक्षण देखिएको छैन भनिएको छ ।
सरकारले अहिले जुन संक्रमण हुनुभन्दा पहिलेको तदारुकता देखाएको छ, त्यो प्रशंसनीय छ र पनि बजारमा देखिन थालेको कृत्रिम अभावको भने राम्रोसँग अनुगमन हुन सकेको छैन । अहिले त सरकारले चैत्र २१ गतेसम्मलाई अघोषित आपतकालको घोषणा गरेको छ । अड्डा अदालत विदा भएका छन्, विद्यालय विश्वविद्यालयहरु विदा भएका छन् र अत्यावश्यक सेवावाहेक सबै कार्यालयहरुलाई दुई हप्तासम्मका लागि सुरक्षित राख्न खोजिएको छ । यो कदम सह्राहनीय हो ।
७.मानिसमा जुन संक्रमण भएको अहिले पाइयो, यसवारेमा अनुसन्धान पनि हुँदैछ र खासै ओखती पनि पत्ता लागेको देखिँदैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले केही हप्तामा नै ओखती पत्ता लगाउने विश्वास त दिलाएको छ तर त्यसको आधिकारिकता पुष्टि हुन सकेको छैन । केही खोपको परीक्षणसमेत भएको देखिन्छ तर त्यसको परिणामका वारेमा विश्वसनीयता प्रमाणित हुन बाँकी नै छ । अमेरिकाले पत्ता त लगाउला तर त्यसको खर्च कसरी सर्वसाधारण विश्वका जनताले बेहोर्न सक्लान् भन्ने डर उत्तिकै देखिन्छ ।
८.मुलुक भनेको जनता हो । जनताको व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्यको वारेमा चिन्ता लिने भनेको सरकारले नै हो । जनताले कतिपय कुरामा पहुँच राख्दैनन् तर सरकारले पहुँच राखेकै हुन्छ । यस्ता बेलामा जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेहरुमाथि सरकारले कडा व्यवहार पनि गर्नुपर्छ । डाक्टरहरुको स्वास्थ्यमाथि पनि झन खतरा हुन्छ ।
जनताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने डाक्टरहरुलाई सुविधा र वास्ता नगर्नेहरुलाई कडा कारबाही गरिनु पर्छ । यही बेलामा भएका मास्क पनि लुकाउने र बढी मूल्य लिने चलन पनि देखिन थालेको छ । यसैलाई भनिएको हो जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाड भनेर ।
त्यस्तो कुनै ओखती त छैन तर तातो पानी पिइरहने, हात साबुनले धोएर मात्र केही चीजमा छुने, अरुले छोएको चीजमा सकेसम्म ग्लोब लगाएर छुने, हात नमिलाउने, नमस्कार गर्ने, अभिवादन गर्ने अनेक अरु परम्पराहरु छन्, तिनको प्रयोग गर्ने, लिफ्टमा जाँदाआउँदा तलाको अङ्क थिच्दा आफ्नो पेन वा कुइनाले थिच्ने, ढोका उघार्दा वा ह्यान्डिल उघार्दा रुमालको प्रयोग गर्ने र मास्क लगाएर मात्र बाहिर जाने गर्नु उचित हुनेछ ।
९.अर्थात् सचेतनाका अनेक उपाय अपनाउने गरौँ भनेर एकले अर्कालाई सिकाउने पनि गर्नुपर्छ । कोभिड १९को कति विस्तार हुने हो भन्ने कुराको वारेमा अहिल्यै भन्न हतारो हुनेछ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको धारणा छ । झन हामीले त कसरी भन्न सक्छौँ र ? मात्र हामीले सचेतना बढाउने र जोगिने हो ।
१०.यो विश्वको स्वास्थ्य समस्या भएको छ र हामीले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै विश्वका अरु देशलाई पनि कसरी यसबाट मुक्त हुन सहयोग गर्न सकिन्छ, गर्दै जाने नीति लिनु पर्छ । निरन्तरतको सजगता र पूर्व सचेतना नै यसबाट मुक्तहुने उपाय हो । यसलाई सामान्य रुपमा पनि लिऔँ र भयानक रुपमा पनि लिआँै । सामान्य यस कारणले कि यो रुघा खोकी र ज्वरो हो, असामान्य यस कारणले कि यो महामारीको रुपमा देखियो ।
११.र अन्त्यमा, सजगताका साथ कोरोना भाइरससँग जुधौँ । सकेसम्म त्यसको प्रभाव नपरोस् भनेर सतर्क होऔँ, भई हाले एकान्त जीवन यापनबाट त्यसमाथि विजय हासिल गर्ने विधि अपनाऔँ । अहिले संक्रमणको त्रास भन्दा हल्ला र सम्भावित परिणामको सन्त्रासले संसारलाई पिरोलेको छ ।
कम्तीमा पनि नेपाललाई कोरोना मुक्त क्षेत्र बनाउन दैनिक जीवनको अनुशासनले ठूलो काम गर्नेछ र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यमा सबैले ध्यान दिएमा मुलुक नै स्वस्थ हुने सम्भावना देखिन्छ । सबैका लागि स्वास्थ्य भनेरमात्र हुँदैन, त्यसको पालना पनि जरुरी छ । खासगरी बृद्ध र बालकहरुकालागि सेवाको जरुरत छ र अत्यावश्यक सामग्रीको कमी हुन नदिनका लागि सबैको प्रयास आवश्यक छ ।
२०७६ चैत्र १०, ०८: ०१: २७
नयाँ बिकल्प,काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साता लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ बदरको माग गर्दै सोमबार परेका रिटमा आज...